चिसोमा इन्फ्लुएन्जाको खतरा, डेढ लाख बालबालिकालाई निमोनिया « Pahilo News
चिसोमा इन्फ्लुएन्जाको खतरा, डेढ लाख बालबालिकालाई निमोनिया
प्रकाशित मिति : 29 December, 2019 8:45 am
काठमाडौँ, १३ पुस । गत बिहीबार पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको आकस्मिक निधन भयो । भाइरस र ब्याक्टेरिया संक्रमण शरीरमा फैलिएर निमोनिया हुँदा उनको निधन भयो । ज्वरो आएपछि श्रेष्ठलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज भर्ना गरिएको थियो । चिसोकै कारण उनको शरीरभर निमोनियाले गम्भीर असर पुर्‍याइसकेको थियो ।
केही दिनयता राजधानी काठमाडौंसहित देशैभर चिसो बढेको छ । चिसोकै कारण रुघाखोकी र निमोनियाका बिरामी बढ्नुका साथै दीर्घरोगीहरूमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ । ‘फ्लु’ (इन्फ्लुएन्जा) ले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा गम्भीर असर गर्छ ।
चिकित्सकका अनुसार जाडोयाम र मौसम परिवर्तनको अघिपछि मौसमी रुघाखोकीसहित ज्वरो (सिजनल इन्फ्लुएन्जा) का बिरामी बढ्छन् । रुघाखोकीले वृद्धवृद्धा, बालबालिका, दीर्घरोगी, अंग प्रत्यारोपण गराएका, गर्भवतीलगायत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरू जोखिममा पर्छन् । सरुवारोग अस्पताल टेकुमा कार्यरत डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्, ‘मौसमी इन्फ्लुएन्जा सामान्य रुघाखोकीको रूपमा देखा पर्छ । तर, केहीमा जटिलता देखापरी बिरामीको मृत्युसमेत हुने गर्छ ।’
उनका अनुसार इन्फ्लुएन्जाविरुद्धको खोप हरेक वर्ष रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका ६ महिनाभन्दा बढी उमेर समूहका जो कसैले पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार लिन सक्छन् । तर, विशेष गरी ६० वर्ष उमेर पूरा भएकाले अनिवार्य रूपमा लिए राम्रो मानिन्छ । यसलाई सरकारले नियमित खोपको सूचीमा राखेको छैन । उनका अनुसार यो खोपले रुघाखोकीका कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउन र संक्रमण फैलन नदिन महत्वपूर्ण काम गर्छ । इन्फ्लुएन्जाविरुद्धको खोप एक हजार देखि १३ सय रुपैयाँमा लगाइन्छ ।
चार प्रकारका इन्फ्लुएन्जा
इन्फ्लुएन्जा ए, बी, सी र डी गरी चार प्रकारका हुन्छन् । इन्फ्लुएन्जा डी जनावरमा मात्रै पाइन्छ । इन्फ्लुएन्जा सीलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । तर, ए र बी ले कडा खालको रुघाखोकी, ज्वरो निम्त्याउँछ । डा. पुनका अनुसार ए को छुट्टै दुई प्रजाति हुन्छ । पहिलो एचवानएनवान पिडिएम ०९, यसलाई सर्वसाधारणले चिन्ने भाषामा स्वाइनफ्लु भन्ने गरिन्छ । अर्को एचथ्रीएनटूलाई हङकङ फ्लुले चिनिन्छ । बीको पनि भिक्टोरिया र यामागाता भन्ने दुई प्रकारका जिन हुन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षमुनिका ३० लाख बालबालिकामध्ये १७ लाखलाई रुघाखोकी हुने गरेको छ । जसमध्ये एक लाख ५५ हजारलाई रुघाखोकीसँगै निमोनिया हुने तथ्यांकमा उल्लेख छ । कुल बिरामीमध्ये चार हजार पाँच सयमा गम्भीर समस्या देखिई अस्पताल नै भर्ना गर्नुपरेको छ ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल इन्फ्लुएन्जाको उच्च जोखिममा छ । ‘नेपालमा तत्काल इबोलाको जोखिम छैन, तर इन्फ्लुएन्जाको उच्च जोखिम छ,’ उनले भने, ‘हामीले थाहा पाउँदासम्म आधा जनसंख्या नाश हुने गरी इन्फ्लुएन्जा फैलिसकेको हुन सक्छ । बर्डफ्लु र स्वाइनफ्लु एक आपसमा मिल्न सक्छन्, यस्तो भएमा महामारी फैलन सक्छ । यी दुई भाइरसले झुक्याइरहेका छन्, आपसमा मिलेर नयाँ रूप लिएर आउन सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।’
कसरी सर्छ इन्फ्लुएन्जा
इन्फ्लुएन्जा भाइरस मानव शरीरमा नाक, मुख र आँखाबाट प्रवेश गर्छ । यो भाइरस खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा निकट सम्पर्कका कारण एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फैलिन्छ । कलेजो, मुटु, मिर्गौला, फोक्सोजस्ता दीर्घरोगी, क्यान्सरको उपचार गराइरहेका बिरामीले इन्फ्लुएन्जाको खोप लिनु उत्तम हुने डा. पुन बताउँछन् । ‘रुघाखोकीले सबैलाई दुःख दिन्छ,’ पुन भन्छन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई यो मौसममा सामान्य रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने समस्याले नै इन्फ्लुएन्जा बल्झिन सक्छ । जसले जटिल खालको निमोनियासमेत हुन सक्छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार मौसमी रुघाखोकी रोकथामका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका खोप लगाउनु नै हो । अहिले फ्लुविरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोप सहजै उपलब्ध छन् । ज्येष्ठ नागरिकमा इन्फ्लुएन्जाविरुद्धको खोप बिरामी हुनबाट जोगाउन कम प्रभावकारी देखिए पनि यसले रोगको जटिलतामा कमी ल्याएर मृत्युदर घटाउँछ ।
यसरी बच्न सकिन्छ
रुघाखोकी र निमोनियाबाट केही दिनमा रुघाखोकी ठीक नभए चिकित्सकलाई देखाइहाल्ने
फ्लुको संक्रमण भएको व्यक्तिलाई तुरुन्त निमोनिया हुन सक्छ, सचेत हुने
संक्रमित व्यक्तिलाई भेट्दा वा सम्पर्कमा आउँदा विशेष सावधानी अपनाउने
आफूलाई रुघाखोकी वा फ्लु भएको छ भने यो निमोनियाको कारणले पनि हुन सक्छ,
यस्तो अवस्थामा खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा रुमाल वा टिस्यु पेपर प्रयोग गर्ने
संक्रमित व्यक्ति भर्ना गरिएको वार्डमा जाँदा सुरक्षित हुने
चिसो, धुवाँधुलो र प्रदूषणबाट बच्ने, चिसोमा बालबालिका र वृद्धवृद्धाको विशेष ख्याल गर्ने
धूमपान नगर्ने, खाना पकाउँदा धुवाँ बाहिर जाने सुधारिएको चुल्हो प्रयोग गर्ने
निमोनियाबाट बच्न खोप (न्युमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन) को प्रयोग गर्ने
६० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धालाई निमोनियाको खोप दिने